Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato muruqyada muruqyada | Ragga Stylish
Waa wax iska caadi ah in la arko dad aadaya qolka jimicsiga oo sameynaya jimicsi aad u qurux badan. Pecs si fiican u horumarsan, gacmo waaweyn iyo ujeedadoodu tahay inay calaamadeeyaan abs. Si kastaba ha noqotee, lugaha ayaa ah qayb ka mid ah jirka oo xoogaa la iloobay maaddaama tababarkoodu caadi ahaan daalan yahay, ka qanacsan yahay oo aan fiicnayn. Waa dhif iyo naadir in qof u istaago lugaha inuu yahay ciyaaryahan ama orodyahan mooyee.
Qodobkaan waxaan uga hadlaynaa murqaha biceps femoral iyo muhiimada tababarkaagu u leeyahay muruqyada lugta intiisa kale. Ma rabtaa inaad ogaato muhiimaddeeda iyo sida ay tahay inaad u tababarto?
1 Tababbarka lugta
2 Muhiimadda daryeelka ee femoris biceps
3 Fidinta iyo duugista
4 Dhaawacyada muruqyada
Dhammaan kuwa hawsha ku jira kasbashada murqaha waa inaad ogaataa in wax soo saarka badan ee testosterone uu ku dhaco lugaha. Hormoonkan ayaa mas'uul ka ah koritaanka murqaha, sidaas darteed, waxaan xiiseyneynaa inaan ku helno uruurin sare. Muruqyada lugtu way waaweyn yihiin, marka laga reebo kubka. Iyaga ayaa mas'uul ka ah inay kuu oggolaadaan inaad lugeyso oo aad ordo.
Waxaa jira muruqyo qaar lugaha oo ka dayacan kuwa kale. Guud ahaan, qof kastaa wuxuu ka walwalsan yahay inuu haysto quadriceps weyn haddii ay tahay bilicsanaanta, baaskiil wadista ama kubbadda cagta. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira muruqyo sida femoris biceps oo muhiimad weyn leh. Muruqan ayaa ku yaal dhabarka lugahaaga. Waa antagonist of quadriceps. Waxaa badanaa loo yaqaan muruqyada muruqyada.
Muruqyadan ayaa muhiimad weyn u leh orodyahannada maadaama ay iyagu yihiin kuwa sameeya murqaha. Biceps femoris wuxuu ka kooban yahay laba dhibcood iyo laba qaybood oo uu ku leeyahay madax dheer oo ah midka ku dheggan ischium iyo qaybta hoose ee ku dambaysa kuna xidhan lafta femur. Labadan madax ee bawdada ayaa ah waxa noo oggolaanaya inaan jilbaha jilcinno. Intaas waxaa sii dheer, qeybta madaxa dheer ayaa mas'uul ka ah la shaqeynta fidinta sinta.
Markii aan bilowno orodka, waxaan si fiican u kala bixin karnaa lugaheena adoo ku mahadsan rogrogmada iyo kordhinta jilbaha mid kasta oo ka mid ah Dhaqdhaqaaqani waxaa dhaqaajinaya biceps femoris.
Muhiimadda daryeelka ee femoris biceps
Sidaan horayba u soo sheegay waxaa jira dad badan oo aada goobta jimicsiga oo aan sameyn lugaha. Ma tababaraan jirka hoose gabi ahaanba ama ma sameeyaan xoogaa quadriceps iyo jimicsi kubka ah oo ah bilicsanaanta. Si kastaba ha noqotee, waa inay ogaadaan in koritaanka murqaha uusan aheyn wax go'doon ah. Muruqyo badan ayaa xaddida koritaanka dadka kale. Tusaale ahaan, qaybta waxbarashadu sifiican ugama kori karto hadaan lahayn dhabarka balaaran ee uu ku faafi karo. Si la mid ah, quadriceps si fiican uma kori karo iyadoon muruqyada ka soo horjeedaa u adeegin sidii iska caabin iyo taageerida koritaanka iyo xasilloonida wanaagsan.
Madaxa gaaban ee femoris biceps waxaan helnaa laanta jilicsan ee dareemaha nafsadda. Madaxa dheer waxaa ku dhexjiray laanta tibial ee dareemaha nafsadda. Sababtaas awgeed, markay wax badan xanuunto marka la socdo oo qayb ka mid ah dhabarkayaga la taabto, waxaan dhahnaa waxaan leenahay "sciatica". Dareemaha nafsadda waa midka ka bilaabma dhabarka hoose wuxuuna maraa badhida sidoo kale wuxuu ku dhammaadaa lugta hoose.
Sababtaas awgeed, markii la tababarayo xididka halbowlaha, xanuunnada iyo xannuunnada qaarkood marwalba way muuqdaan illaa muruqa uu bilaabo inuu la qabsado oo xitaa ma soo baxaan. xargaha markaan tababareyno. Toddobaadyada ugu horreeya ee aan bilaabayno tababarka lugaha, waa muruqyada sida aadka ah u dhibaatooda iyo kuwa ugu badan ee dhaawaca marka aan adkaano. Waana taas midda ku jirta femoral waa dareenka ugu dheer uguna balaaran jirka aadanaha.
Aad ayey muhiim u tahay inaad muruqyadan si fiican madaxa ugu tababarto oo aad siiso daryeelka uu mudan yahay, maadaama aan hore u aragnay doorka uu ciyaarayo.
Fidinta iyo duugista
Daryeelka ay tahay inaan siino muruqyada muruqyada waxaan ka helaynaa fiditaan ka hor inta aan jimicsi la samayn iyo duugis ka dib markaan sameynay. Waxa ugu horeeya waa inaad fariisato sagxadda oo aad fidiso lugtaada midig. Waxaan u laabaneynaa jilibka bidix si aan cagta ugu dhigno bowdada midig ee midig. Sidan oo kale, waxaan cagaha bidix ugu qaadi karnaa sida ugu dhow miskaha intii suurtagal ah.
Waxaan horay ugu tiirsanaaneynaa oo aan gaarnay inaan isku dayno inaan qabanno cirifka midigteenna. Waxaan ku ogaan doonnaa fiditaanka femoral. Kala-bixintaani waa inaan si kadis ah loo qaban ama waxaa laga yaabaa inaan dhaawacno nafteena marka aan raadineyno caksiga Mar haddaynu isa saarnay Waxaan isku dayeynaa inaan qabanno booska fidinta 10 illaa 30 ilbiriqsi. Waxaan ku celin doonaa fidintan 3 ama 4 jeer si aan u awoodno inaan si fiican u kala bixin. Waxaa ugu wanaagsan in lugaha la beddelo si muruqa uu uga nasto fiditaanka.
Xagasha jilbaha waa la beddeli karaa si loo kala bixiyo qaybaha kala duwan ee muruqyada muruqyada. Hawlaha qaarkood ee aan ku baranno sida loo tababaro loona daryeelo biceps-keena ayaa ah yoga, Pilates iyo dabaasha. Intaas waxaa sii dheer, howlahaas waxaad ka heli kartaa dhaqdhaqaaq iyo dabacsanaan weyn.
Ka dib markaad dhammeysid waxqabadyada waxaad u jeedsan kartaa inaad ku duugto dusheeda. Kursi iyo dhowr kubbadood oo tennis ah ayaad naftaada ku siin kartaa si aad u dejiso murqaha culeyska la gudbiyay. Ujeeddadu waa inaad naftaada u dhiibto gacmo-qabe xirfad leh, laakiin miisaaniyaddu dad badan kuma gaadho.
Hadda waxaan u socon doonnaa dhaawacyada ugu badan ee caadiga ah ee aan heli karno markii aan ku jirno dhaqdhaqaaq jireed muruqan:
Qandraaska femoris biceps. Tani waxay ku abuureysaa cidhiidhi iyo xanuun xagga dambe ee muruqa. Waxaa jiri kara nooc ka mid ah barar iyo xoogaa nabarro. Waxaa lagu daaweeyaa nasasho, baraf, iyo kor u qaadista lugta nasashada.
Ilmada. Ilmada waa dhaawac aad u daran oo ay soo saarto ilmada fibrillar. Xanuunku waa mid aad u daran waxaadna arkeysaa barar iyo nabar.
Tendinopathy Cudurka 'tendonitis' ee caanka ah biceps femoris. Waa dhabarka dambe ee jilibka halka uu ku yaal jilibku. Caabuqu wuu xanuunaa oo lafta ayuu galiyaa. Waxaa jiri kara xanuun markaad jilibka foorareyso iyo xoogaa adkaansho maalmaha soo socda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran doontaan daryeelka iyo tababbarka biceps femoris si wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato muruqyada muruqyada